अब इसीडी शिक्षकको तलब के होला ? सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय - Web Tv Khabar
अब इसीडी शिक्षकको तलब के होला ? सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
श्रावण २५, २०७८ सोमवार १७:५२ बजे
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।,’
यसअघि बजेटमार्फत सरकारले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ तलब बढाएको थियो ।
केन्द्र सरकारले तलब तोकेर स्थानीय तहलाई पठाए पनि स्थानीय तहले तलब दिन आनाकानी गरेका छन् । तोकिएको तलब नपाएपछि यतिखेर देशभरका इसीडी तथा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
सरकारले सोमबार गरेको निर्णयअनुसार इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले अब १५ तलब पाउनेछन् । केन्द्र सरकारले तोकेको ८ हजार रुपैयाँमा ७ हजार थपेर स्थानीय तहले १५ हजार दिनुपर्छ ।
फलोअपः माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलनमा इसीडी शिक्षक